सेनालाई प्रहरीको अधिकार ? – Weekly Nepal
सेनालाई प्रहरीको अधिकार ?
in पत्रपत्रिका — २९ पुष २०७६, मंगलवार १०:००
सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ पूर्जीको अधिकार दिदा नेपाल प्रहरी रिसायो । अहिलेसम्म पनि दुई संगठनबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । अहिले. नेपाली सेनाले समेत प्रहरीले जस्तै छापा हान्न सक्ने कानून बनाउन लागिएको छ । यसले प्रहरी अधिकारीहरूले चासो दिएका छन्।
सेनाको गुप्तचरलाई बलियो बनाउन भन्दै रक्षा मन्त्रालयले नयाँ कानूनको मस्यौदा बनाएको छ । जन मस्यौदा कानून मन्त्रालय रायका लागि पुगेकोमा कानून मन्त्रालयले त्यसलाई फिर्ता पठाइदिएको छ । सेनामा कानून नै बनाएरगुप्तचर बनाउन आवश्यक नभएको कानून मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई छ। तर, सैनिक अधिकारीहरू जसरी पनि शक्तिशाली प्लगर वनाउने पक्षमा छन् ।
अहिले पनि सेनामा उपरथीको कमाण्डमा मिलिट्री इन्टेलिजेन्स सक्रिय छ । जस अन्र्तगत ठूलो संख्यामा सैनिकहरू सादा पोशाकमा सूचना संकलनमा खटिने गर्दछन् । सेनाले सूचना संकलनका नाममा छापा हान्न सक्ने सहितको अधिकार माग गरिएको छ।
एकातफ सरकारले नयाँ कानूनले ल्याएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउन लागेको छ । यस्तो अवस्थामा सेनामा गुप्तचर विभाग बनाउन छुट्टै कानून बनाउन लागेपछि, यस्तो प्रक्रिया विवादमा परेको छ। नेपाल प्रहरी समेत यसप्रति सशंकित बनेको छ । सेनालाई प्रहरी जस्तो बन्ने रहर लागेको प्रहरी अधिकारीहरूको आरोप छ।